Ọnụ ego data dị ukwuu | Martech Zone
Kwa ụbọchị, 2.5 quintillion bytes nke data sitere na ndi oru ahia na ndi ahia. Agbanyeghi na ịchekwa ugwu data n’olileanya nke igosiputa ihe omuma a puru iche dika ihe bara uru nke oge na ego ha, onu ahia ha nwere ike iju gi anya.
A na-adịbeghị anya infographic kere site Ngwa Lattice egosi na 88% nke ndị otu ahịa na-efu ohere azụmaahịa n'ihi enweghị ozi zuru oke. N'ime ndị nyochara, 24.5% chere na aka ya dị data na oge ọ na-ewe iji mee nyocha, ebe ndị ọzọ zaghachirin enweghị nsogbu ma ọ bụ na ha enweghị mmasị ịhazi mbubata data.
Na mgbakwunye na enweghi nke zuru oke nnukwu atụmatụ data, ịchekwa na nyochaa ozi bụ n'ezie efu azụmahịa nnukwu ego. Typicaldị ahịa a na-akwụkarị na-emefu 4 awa / izu na-akwadebe maka ọrịre, na otu nde nde reps ugbu a na US, nke a ruru $ 50 ijeri kwa afọ.
Lee ihe omimi miri emi ihe Lattice kpughere:
Tags: nnukwu datannukwu atụmatụ datadatanchekwa datainfographicatụmatụ